Ihe ngosi Jammer
Mgbe anyị na-eji a izu ụka, anyị chọrọ ịnụ ụtọ oge anyị free na-etinye a ụbọchị ka anyị mmasị omume ntụrụndụ. Mgbe anyị achọghị ka ọgba aghara site na oku ekwentị, anyị kwesịrị jammer mgbaama ekwentị iji lụso oku mgbagha. Mgbe ụfọdụ, anyị achọghị ịgwa onye ọ bụla okwu, mana ndị na-akpasu iwe ga-akpọ oku ...
Jammer ekwentị Ekwentị
Ekwadoro jammer na ekwentị ebe dị iche iche ebe amachibidoro iji ekwentị, dịka ụlọ nyocha, ụlọ akwụkwọ, ọdụ mmanụ, ụka, ụlọ ikpe, ọba akwụkwọ, ebe a na-enwe nzukọ, ebe ihe nkiri, ụlọ ọgwụ, gọọmentị, ego, ụlọ mkpọrọ, nchekwa ọha. na ụlọ ike ndị agha. Mgbe ole...
Cikpụrụ nke ekwentị mkpanaaka Jammer
site ha na 20-09-23
Akpadoro jammer ekwentị mkpanaaka na ụdị ebe niile amachibidoro iji ekwentị mkpanaaka, dịka ụlọ nyocha dị iche iche, ụlọ akwụkwọ, ọdụ mmanụ, ụka, ụlọ ikpe, ọba akwụkwọ, ebe nzukọ, ebe ihe nkiri, ụlọ ọgwụ, gọọmentị, ego, ụlọ mkpọrọ. , nchekwa ọha na ndị agha ...
Gini mere GPS Jammer ji wee wuo
site ha na 20-08-23
N'oge a, ndị na-agba GPS mgbaama na-arụ ọrụ dị mkpa na ndụ anyị. Onu ogugu nke ebe eji eme ihe na-abawanye. Gini mere ndi jammer GPS ji ewu ewu? Ihe ewu ewu nke ndị na-ekpochi GPS nwere ọtụtụ ihe iji iji ndị na-eso GPS eme ihe n'ụzọ zuru ezu, n'ihi na a na-eji ngwaọrụ nsuso GPS ọtụtụ ebe ...